Torohevitra hanomanana fivoriana fakana sary amin'ny alina | Famoronana an-tserasera
Ny fakana sary voajanahary dia miavaka amin'ny maha-karazana sary azy izay misy fitaoman'ny zavatra ivelany betsaka kokoa. Misy singa tsy voafehintsika, zavatra izay tsy mitranga amin'ny sary studio ohatra. Izany no antony maha zava-dehibe ny fiezahantsika hamantatra mialoha ireo toe-javatra sy toe-javatra sasantsasany hanararaotana ny fotoana mety ary hitrandrahana betsaka amin'ny asantsika sy ny fotoantsika. Misy fotoana tsy ahafahantsika mahazo sary miavaka sy fotoana izay misy ny toe-javatra ilaintsika. Ny fahalalana an'io mialoha dia hanome tombony lehibe antsika indrindra raha fizarana fakana sary amin'ny alina izany.
avy eo Manolotra toro-hevitra maromaro aho izay hanampy anao hanao ny fizotrany ho mora kokoa sy mora kokoa:
1 Tsidiho ny sehatra alohan'ny hananganana azy hanombohana ny fotoanao
2 Zahao ny vinavinan'ny toetrandro
3 Kajy ny halaviran'ny hyperfocal
4 Mitandrema ary miezaha tsy hahita
Tsidiho ny sehatra alohan'ny hananganana azy hanombohana ny fotoanao
Ny fitsidihana ny toerana mandritra ny andro dia hanampy antsika handamina tsara kokoa ny fotoam-pivoriantsika ary hahafantatra izay singa mandrafitra ny lampihazo, inona ny jeografia ananan'ny toerana ary inona ireo faritra mety kokoa hametrahana ny fakantsarintsika. Ny momba izany dia ny fikarohana ireo zavatra mety atolotry ny toerana antsika hahafahantsika miatrika ireo olana mety hitranga. Raha toerana vaovao ho anao izy ity, asaina sary anao amin'ny hazavana manjelanjelatra mba hahafahanao mikasa ao an-trano sy amin'ny fiadanan-tsaina bebe kokoa ny drafitrao sy ireo faritra hipetrahanao.
Zahao ny vinavinan'ny toetrandro
Amin'ny Internet dia misy pejy maro izay hanampy anao hitazona fifehezana tsara ny toetrandro. Tsy maintsy hanara-maso ny faritra sy amin'ny fotoana kasaina haleha isika. Amin'io lafiny io dia tsy maintsy manandrana mitady fampahalalana marina indrindra isika mba hialana amin'ny tsy ampoizina. Ireto misy fitaovana an-tserasera, maro amin'izy ireo no manolotra fampahalalana an'io karazana io amin'ny fotoana tena izy.
Toetr'andro: Ity safidy ity dia manolotra antsika ny safidy hanadihadiana ny vinavinan'ny toetrandro miaraka amin'ny marimarina tanteraka ho an'ny faritra rehetra eto amin'izao tontolo izao. Anisan'izany ny safidy hijerena ny andro sy ora marina.
Ho fanampin'izany, manome antsika ihany koa ny fahafahana miditra amin'ny sari-tany samihafa izay refesina ny fiovaovana samihafa toy ny orana, ny mari-pana, ny rahona na ny rivotra. Amin'izany fomba izany dia afaka manana hevitra marimarina momba ny fivoaran'ny tafio-drivotra isika mandritra ny fotoam-pivoriana.
Ho fanampin'izany, ny fakana hevitra amin'ny latabatra solunar dia hanome antsika fampahalalana marina sy tena ilaina satria ho fantatsika tsara hoe inona ny dingana misy ny volana ary rahoviana izy no hiposaka. Betsaka ny pejy manolotra an'ity karazana fampahalalana ity ary misy ny ora fiandrasana sy ny filentehan'ny masoandro ary koa ny volana isaky ny volana sy isaky ny toerana ara-jeografika. Izy ireo koa dia manome angon-drakitra mifandraika toy ny taona, dingan'ny volana ary ny isan-jaton'ny famirapiratana. Etsy ankilany, mety ho antsika ny misintona programa manintona toa an'i Stellarium hahafantarana bebe kokoa momba ny kintana, ireo antokon-kintana sy ny toerana misy azy ireo.
Fandaharana iray hafa izay mety mahaliana ihany koa ho an'ity karazana fivoriana ity dia The Photographer's Ephemeris, noforonin'ny sary iray mpaka sary malaza ary hanome antsika fanazavana bebe kokoa momba ny ephemeris an'ny masoandro sy ny volana. Mila mametraka ny toerana misy antsika amin'ny sarintany fotsiny isika ary hanondro azy ireo ny tsipika ephemeris avy amin'ny toerana hivoahan'ny kintana sy hametrahana azy. Anisan'ireo asany, manaitra ny fahafantarana na dia ny famolavolana aloka sy jiro aza izay hitranga amin'ny toerana misy antsika mandritra ny andro sy ny alina. Tsy isalasalana fa fitaovana tonga lafatra mba hifehezana ny zava-drehetra amin'ny fomba milimetatra. Azo ampiasaina na amin'ny solosaina na telefaona finday na tablette.
Kajy ny halaviran'ny hyperfocal
Tsy maintsy dinihintsika ihany koa raha mila ny halaviran'ny hyperfocal ny fotoam-pivoriantsika ary raha izany dia mila manisa kajy isika hampiharana azy ireo ary hisafidy ireo masontsivana mety indrindra. Betsaka ny pejin-tranonkala izay hanampy anao hanamora io asa io. Ny iray amin'izy ireo dia ny Dofmaster izay ahafahantsika mamorona latabatra mandray ny masontsivana toy ny elanelana, ny karazana sensor misy ny fakantsary ary ny maodely. Ireo dia calculatera an-tserasera azo alamina tanteraka hampifanarahana ny kajy amin'ny zava-misy iainanay. Ho fanampin'ny valiny, dia misy koa kisary na naoty maromaro izay hanampy antsika hahafantatra tsara kokoa ny zava-drehetra.
Mitandrema ary miezaha tsy hahita
Farany nefa tsy farany, tadidio fa miankina amin'ny faritra aiza no misy azy, ity karazana fivoriana ity dia mety hampidi-doza bebe kokoa. Raha resaka tontolo voajanahary no resahina dia tsy mila milaza fa aloha tokony hampahafantarintsika tsara ny karazana biby mipetraka ao io toerana io, raha ilaina ny hitondrantsika fitaovana manokana ary hikajiana ireo fepetra ilaina raha toa ka dia ho fotoana maharitra. Manoro hevitra antsika ny hiezahantsika hiasa amin'ny alina amin'ny volana feno noho ny hazavany sy ny fiezahantsika hamono ny jiro rehefa mihetsika isika satria raha tsy izany dia hijaly tsy ilaina ny fahitana antsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Torohevitra hanomanana fivoriana fakana sary amin'ny alina